IEM an-dRajoelina : Fampanantenana poakaty ranofotsiny -
AccueilRaharaham-pirenenaIEM an-dRajoelina : Fampanantenana poakaty ranofotsiny
05/02/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Fandrebirebena saim-bahoaka. Raha toa ka nanatanteraka kaoferansa mahakasika ny « Initiative Emergence Madagascar » (IEM) tany Paris, Frantsa, ny filohan’ny Tetezamita teo aloha, Andry Rajoelina, ny 29 janoary teo, hita fa fampanantenana poakaty ranofotsiny ihany izany.
Raha toa ka manana eritreritra ny hanatanteraka fisandratana ho an’ny firenena ingahy Andry Rajoelina, maninona no tsy tamin’ny fotoana nitondrany no nanaovany izany fa tsy amin’izao vanim-potoana izao.
Tsiahivina ary voaporofo fa tsy nahavita sy nahatanteraka fampandrosoana ny firenena ny filohan’ny Tetezamita nandritra ny nitantanany ny firenena nandritra ny dimy taona. Ankehitriny indray, dia mitady hampandry adrisa ny vahoaka tamin’ilay IEM ingahy Andry Rajoelina. Tsy misy zava-mivaingana azo heverina ho fampandrosoana sy fampisandratana ny firenena ny votoatin’ilay kaonferansa nitondrany izany IEM izany. Tsy voaresaka tamin’izany mihitsy ny teo amin’ny tontolon’ny angovo, izay antoka iray ho amin’ny fampandrosoana ny firenena. Zary lasa kobaka am-bava, tsy misy azon’ny vahoaka antenaina akory ilay zavatra raketin’ilay IEM nankalazana fatratra tany Paris.
Efa te hiverina eo amin’ny fitondrana ingahy Andry Rajoelina vao mitantara ny tian-katao amin’ny fampisandratana ny firenena. Azo lazaina ho efa dilan’ny fotoana, satria ny vahoaka niandry fampandrosoana nandritra ny dimy taona nitantany, tsy nisy izany. Zara raha nahatsangana fotodrafitrasa ho an’ny vahoaka. Manampy izany, teratany vahiny efa mampiahiahy avokoa ireo manodidina sy ao ambadik’ingahy Andry Rajoelina tamin’ilay lazaina fa IEM.
Fitaka bevava no azo ilazana ilay IEM nambara tany Paris. Kobaka am-bava no betsaka, satria dia fampanantenana poakaty no azo ilazana izany. Ahoana moa no inoan’ny vahoaka fa hotanterak’ingahy Andry Rajoelina avokoa ilay IEM. Teo amin’ny Fitondrana aza izy tsy nahavita nanatanteraka ny vina nampanantenainy ny vahoaka akory.